August | 2016 | TAJBIJ.COM
बुर्तिवाङमा रेडियो बुर्तिवाङको परीक्षण प्रशारण सुरु !
August 31, 2016 तजबिज खबर	Leaveacomment
रामबहादुर थापा, बागलुङ, २०७३ भदौ १५ । बागलुङमा नयाँ एफ.एम. रेडियो खुलेको छ । कर्मभूमि कम्युनिकेशन एण्ड पब्लिकेशन प्रा.लि.ले स्थापना गरेको ‘रेडियो बुर्तिवाङ’ले आफ्नो परिक्षण प्रसारण सुरु गरेको छ । असोजदेखि नियमित प्रसारणमा जाने रेडियोका स्टेशन म्यानेजर कृष्ण कँडेलले जानकारी दिए ।
‘न्याय, समानता र समृद्धिको लागि रेडियो बुर्तिवाङ’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसाथ गरि रेडियो स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । पश्चिम बागलुङको व्यापारिक केन्द्र बुर्तिवाङमा खोलिएको रेडियोले ग्रामिण भेगका नागरिकलाई सूचनाको सरल पहुँचमा जोड्ने विश्वास लिइएको छ । ‘दुर्गम भेगका जनसाधारणसम्म सूचनाको सहज पहुँच पु¥याउन रेडियो स्थापना गरिएको छ’ म्यानेजर कँडेलले भने ‘यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण र जागरणको लागि पनि रेडियोबाट टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’
हाल परिक्षणकालमा गीत, सङ्गीत मात्र प्रसारण गरेर स्रोता प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको रेडियो व्यवस्थापनले जनाएको छ । ५ सय वाट क्षमताको रडियो प्रसारण बागलुङको पश्चिम भेगसँगै छिमेकी जिल्ला गुल्मी, प्युठान, रुकुम, रोल्पा सम्मका केही भूभागमा पुग्ने जनाइएको छ । रेडियो बुर्तिवाङलाई एफ.एम. ब्याण्डको ९५ दशमलव ६ मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ । यसअघि बुर्तिवाङमै सामुदायिक रेडयो ढोरपाटन र सामुदायिक रेडियो परिवर्तन प्रशारणमा रहेका छन् ।
महिला अब दर खाने कार्यक्रममा मात्र सीमित रहन हुन्न- साँसद चापागाईँ
August 31, 2016 माधव पराजुली	Leaveacomment
खानीगाउँमा तीजगीत प्रतियोगिता तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न !
माधब पराजुली, पर्वत, २०७३ भदौ १५ । नेपाली महिलाहरुको महान चाड् हरितालिका तिज नजिकिदैँ जादाँ बिभिन्न ठाउँमा तिजको रौनक शुरु भएको छ । तिजको अवसरमा बिभिन्न आमा समुह,क्लवहरु, र मिहिला समुहको आयोजनामा बिभिन्न ठाउँहरुमा तिजगित प्रतियोगिता त कहिँ दर खाने कार्यक्रमको आयोजना बाक्लिएको छ ।
यसै बिच पर्वतको खानीगाउँमा तिजगित प्रतियोगीता एवं शुभकामना आदान प्रदान तथा दर खाने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मोती सामुदायिक पुस्तकालय र खानीगाउँ गाबिसको कार्यालयको सहआयोजना महिला सञ्जाल खानीगाउँको आयोजनामा बुधबार धुमधामका साथ सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा सांसद कल्पना चापागाँईले महिला सशक्तिकरणको सन्देश वोकेको नेपालीहरुको महान् चाड तीजलाई महिला अधिकार र सशक्तिकरणको चाडका रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
उनले तीजे भाकाका नाउमा रत्यौली र दोहरी गीत सँगै विकृति विसंगति भित्रिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तिजगीत प्रतियोगिताका माध्यमवाट तीज गीत र तिज भाकाको संरक्षणमा योगदान पुगेको बताईन् । चापागाईले कुसंस्कारलाई निरुसाहित गरि अव सुसंस्कारको बिकास गनुपर्ने बताउदै महिला अब दर खाने कार्यक्रममा मात्र सीमित नभई सम्पुर्ण कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमकी बिशिष्ट अतिथि तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगा पन्तले महिलाहरुमा परिर्वतनको खाँचो रहेको भन्दै सामाजिक रुपान्तरणको लागी महिलाहरुले क्रान्ति गर्नुपर्ने बताईन् । उनले महिलाले पनि देश बिकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्ने र राज्यस्तरमा महिलाको सहभागीता पुरुष सरह हुनुपर्ने बताउदैँ महिलाहरु चुलो चौकोमा मात्र सीमित नभई आफ्नो हक अधिकारका लागी आफै आवाज उठाउनुपर्ने बताईन । प्रनाउ पन्तले चाडपर्व लाई तड्क भड्क नगरी अफ्नो क्षमता अनुसार मनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिईन् ।
कार्यक्रममा फेकोफन पर्वतका अध्यक्ष किशोर सापकोटा,गाबिस सचिब सुर्य प्रकाश लामीछाने लगाएतले बोलेका थिए ।
तीजगीत प्रतियोगितामा खानीगाउँ गाबिसका ७ समुहले सहभागिता जनाएका थिए । जसमध्ये हिरा सापकोटाको समुह प्रथम,विष्णु पौडेलको समुह द्धितिय र अम्बिका सुवेदीको समुह तृत्य भएका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम द्धितिय,तृत्य हुने समुह लाई क्रमशः नगद रु २ हजार,१५ सय र १ हजार तथा सम्पूर्ण सहभागी समुह लाई पाँच,पाँच रुपैँया प्रदान गरिएको थियो ।
महिला सञ्जालकी अध्यक्ष केशा परियारको अध्यक्षता,सञ्जालकी सचिब सावीत्रा सापकोटाको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सामाजिक परिचालक सुरक्षा लामिछानेले गरेकी थिईन् ।
अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, फिचर
समाचार भित्रको बिचार : पहिरोले घर ढलायो, रमिते राज्यले मन जलायो !
August 31, 2016 प्रेम सुनार	Leaveacomment
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७३ भदौ १५ । आफन्तको घरमा दुई दिन पाहुन बस्न त कति अफ्ठ्यारो लाग्छ भने अझ झन सिङ्गो परिवारै लिएर आफन्तको घरमा महिनौ बस्न कति मुस्किल पर्ला आफै महसूस गरौं । तर पनि प्राकृतिक विपतले विवस छन गुल्मी वाग्लाका एक परिवार महिनौं सम्म छिमेकीको घरमा बस्न ।
कति दिन अर्काको घरमा बस्ने ? त्यसैले केहि उपाय लाग्थ्यो कि भनेर आज सदरमुकाम तम्घास आई पुगेका घिमिरेले सिडियो उदयबहादुर राना मगर समक्ष विन्ती विसाउन पुगे । सिडियोले के गरुँन ? माथिल्लो निकायकै छुचो हात भए पछि जम्मा तीन हजार रुपैयाँ दिएर पठाए ।
त्यस पछि उनि रेडक्रसमा पुगे । एउटा त्रिपाल मिल्यो , साथमा केहि भाँडा–कुँडा र सामन्य लत्ता कपडा । त्यस पछि उनि पत्रकार खोज्दै हिडे । त्यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठलाई फेला पारे । श्रेष्ठले यस समाचारदातालाई फोन गरे । सदरमुकाम वाहिर रहेको यस समाचारदाताले समाचार टिप्नु ्िशवाय तत्काल केहि गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।
म अहिले मजुवा छु भन्दा पनि केहि भ्याउँ नपाएका घिमिरेले एकै छिनको लागि आउनुस् न भनेर अनुरोध गर्दै थिए । उनको आग्रह थियो –‘ मेरो वास बनाउन सक्ने केहि उपाय भएन , बनाई दिने कुनै संघ संस्था खोजी दिनु प-यो । ’
तर घिमिरे जस्ता थुप्रै गरिव विपन्नले प्रकृतिक विपत्तीमा घरवासविहीन हुँदा पनि राज्य रमिते बन्छ भने ती निमुखाहरुको मन नजलेर अरु कसको जल्ला ?
कसरी ती जलेका मनहरु नछट्पट्टी चुप लागि बस्लान ? यसर्थ पनि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोक्नेहरुले शान्ति ..शान्ति ..जपेर मात्रै शान्ति नआउला कि ?
लेखक. तजबिज डटकमका संपादक हुन् ।
हरिचौरकी विष्णु कँडेल कुखुरा पालेरै मालामाल …
कँडेल भन्छिन् “… छोरा छोरी पढाउदै छु २/४ लाख कमाउदैछु !”
गुमानसिह भण्डारी, गल्कोट २०७३ भदौ १५ । गल्कोट हरिचौरकी बिष्णु कडेलले घरमै कुखुरा व्यवसाय गरेर मालामाल बनेकी छिन् । कडेलले २०७० सालमा १ लाखको लागतमा पोल्ट्री फार्म निर्माण गरि ब्यवसायीक रुपमा कुखुरापालन व्यवसाय सुरुगरेकी हुन् । उनले पहिलो पटक २०७१ सालमा ४० र २०७२ सालमा ४५ वटा कुखुरा बिक्रि गरेकी थिईन् । उनले कुखुरा पालन सम्वन्धी तालिम पनि लिएकी छिन् ।
बोईलर कुखुरा ल्याई व्यवसाय सुरु गरेकी कडेलले हाल मासिक २० हजार खुद नाफा कमाउने गरेका बताईन् । घरको खर्च कटाएर मासिक २० र २५ हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ । कुखुरा व्यवसायबाटै एक छोरा र एक छोरी पठनपाठन चलिरहेको कँडेलले बताईन । बार्षिक रुपमा कुखुराबाट ब्यवसायबाटै परिश्रम र घरखर्च कटाएर २ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ उनी भन्छिन् ।
श्रीमानले कमाएको पैसा माग्न परेको छैन । श्रीमानले अध्यापन गराउनुहुन्छ म घरको धन्दा सकेर बचेको समय कुखुरा ब्यवसायलाई दिएकी छु कडेलले तजबिजसंग भनिन् । श्रीमानको कमाइमा मात्रै भरपर्नुपनुपर्ने मान्यता तोड्दै कडेल ब्यवसायमा लागेकी हुन् । श्रीमानले कमाएको र कुखुराबाट भएको आम्दानी गर्दा बर्षमा करिब २, ३ लाखसम्म बचत हुने गरेको कडेलको भनाई छ ।
हरितालिका तीजको मुखैमा आएर करिब २० हजार बराबरका कुखुरा बेचेको कडेलका श्रीमान टिकाराम कडेलले जानकारी दिए । कुखुरा ब्यवसायी कडेल गाउका बिभिन्न आमा समुह, बिद्यालय, बन लगायतमा आबद्ध छिन् । सामाजिक कार्य सँगै ब्यवसायलाई समेत अगाडि बढाउदै आएकी कँडेलको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेको छ ।
गल्कोट क्षेत्रका कृषकहरु किबीको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित !
गुमानसिह भण्डारी, गल्कोट २०७३ भदौ १५ । गल्कोट उपत्यकाका विभिन्न गाविसहरुमा परीक्षणका रुपमा सुरु गरिएको किबीखेती सफल भएपछि कृषकहरु किवी खेती तर्फ आकर्षित बनेका छन । गल्कोटको दुदिलाभाटी गाविसमा किवी लगाएको चार वर्षमै बोटमा फल लागेपछी त्यहाँका कृषकहरुमा किवीप्रति अभिरुची बढेको हो ।
यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्र हरिचौरले हिलमा किबीको सम्भावनाबारे बताएपछि हिलमा कृषकहरुले करिब ७ सय बिरुवा लगाएका थिए । २०७१ सालमा परीक्षणका रुपमा गाबिसमा ३।४ सय किबीका बोट लगाईएको थियो । हिल गाबिस वडा नम्बर ४ का धेरैजसो कृषकले लगाएको किबीको बोटले फल दिन सुरु गरेपछि अन्य कृषकहरुले समेत बिरुवा माग गर्न थालेको गाबिस स्तरिय कृषि समिति हिलका अध्यक्ष खड्क बहादुर कार्कीले बताए ।
हिल गाबिस भित्रका वडा नम्बर ४ का सबैजसो कृषकहरुले किबि खेति गरेका छन भने वडा नम्बर ३, ५, ६ र ७ मा पनि केहि मात्रामा बिरुवा लगाईएको कार्कीको भनाई छ । कृषि बिज्ञहरुले ४ बर्ष पुगेपछि फल बताए पनि २ बर्षमै फल लागेपछि बाकिँ वडाका कृषकहरुले समेत खेति गर्ने बताएका छन । परिक्षणको रुपमा लगाएको किबिमा फल लागेपछि आशा पलाएको छ” कृषक दल बहादुर रोकाले भने लगानि अनुसारको उत्पादन भए आगामि दिनहरुमा ब्यवसायीक रुपमा खेति गर्ने सोच बनाएको छु ।
नेपाली बजारमा प्रतिकिलो रु ६०० सम्ममा बिक्री हुने किबीको व्यावसायिक खेती गल्कोटका कृषकहरु खेतितर्फ आकर्षित बनेका छन ।
रोपेको तीन वर्षदेखि फल दिने किबीले लगातार ८५ वर्षसम्म आम्दानी दिने भएकाले आफू यसमा आकर्षित भएको गाबिस स्तरिय कृषि समिति हिलका सचिव सूर्य भण्डारीले जानकारी दिए ।
बिद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाईन काट्न कर्मचारी परिचालन !
August 31, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
पर्वतमा २ सय भन्दा बढी ग्राहकहरुले महिनौँ देखी महशुल बुझाएका छैनन् !
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ भदौ १५ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र पर्बतले २६ जना भन्दा बढी ग्राहकको विद्युत लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिरणले विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले एक हप्ताको अवधिमा २ महिना देखि ५ हजार भन्दामाथि सम्मको रकम भु्क्तानी गर्नको लागि बाँकी रहेकाहरुको विद्युत लाइन काटिएको जनाएको छ । झण्डै २ सय ग्राहकले महिनौदेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।
सदरमुकाम कुश्मा सहित दक्षिणी फलेवास, पातिचौर लगायतका क्षेत्रमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुको लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्बत वितरण केन्द्रका आय प्रमुख शम्भुु सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महिनौदेखि महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुको लाइन काट्न अहिले जिल्लाभर नै कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार ३ महिनाको समयमा महशुल नबुझाउने उपभोक्ताहरु मध्येबाट ३० लाख भन्दा बढी विद्युत बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये ७ लाख ३६ हजार ३ सय ५रुपैँया बक्यौता रकम उठिसकेको छ । विद्युत महसुल नबुझाउनेहरुमा सर्वसाधारण, विभिन्न उद्योग, सरकारी कार्यालय रहेका छन् । विद्युत महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुंखु रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । लुंखुमा रहेको प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रले दुई बर्षभन्दा बढि लामो समयदेखि महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कर्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रबाट सवैभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कालीगण्डकी क्रसर उद्योगबाट २ लाख ६२ हजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुंखुको १ लाख २० हजार, जिल्ला अस्पतालबाट १ लाख ४३ हजार र स्वास्थ्य कार्यालयबाट ७० हजार विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
जन्मदिनमा विपन्न बालकलाई कामनाको शैक्षिक सहयोग !
विशन क्षेत्री, पर्वत २०७३ भदौ १४ । पछिल्लो समयमा जन्मदिनलाई हिप्पी शैलीमा हज्जारौँ खर्चिएर जन्मदिन मनाउने चलन बढेको छ । पाश्चात्य शैलीको अनुकरण गर्दै भड्किलो पारामा जन्मदिन मनाउने परम्परालाई चुनौती दिँदै सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील पर्वतका एक युवतीले आफ्नो जन्मदिनमा विपन्न दलित बालकलाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग गरेकी छन् । जिल्लामा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध कामना रेग्मीले आफ्नो २४ औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शैक्षिक सहयोग गरेकी हुन् ।
उनले बागलुङघर भई कुश्मामा बस्दै आएका विमल नेपाली र राहुल नेपालीलाई एक वर्षलाई पुग्ने गरी कपी, कलम तथा सरसफाईका सामाग्री वितरण गरेकी हुन् । उनीहरु शिवालय बहुमुखी क्याम्पसमा क्रमशः कक्षा पाँच र कक्षा दुईमा अध्ययनरत छन् । नेपाली दाजुभाई उनकी मातापिता सँगै कुश्मा नगरपालिका ९ मा बस्दै आएकी छन् । नेपाली दम्पत्तिले भारी बोकेर दुई सन्तानको पालनपोषण गर्दै आएका छन् ।
घरायसी कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनीहरुको पठनपाठन नरोकियोस् भन्ने उद्धेश्यले सहयोग गरेको रेग्मीले बताईन् । यसबाट नेपाली दाजुभाईलाई शैक्षिक सहयोग पनि हुने तथा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिलेको उनको भनाई छ । जन्मदिनमा हज्जारौँ खर्चिने विकृतिलाई अन्त्य गरी सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न समेत उनले सुझाव दिईन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा समाज सुधार सेवा मञ्च सिसेफ नेपालले शुभकामना आदानप्रदान तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उनी सिसेफ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
पर्वतको लिमिठाना गाविस वडा नं. ७ मा वि.सं. २०४९ सालमा जन्मिएकी रेग्मी वर्षौँदेखि सदरमुकामका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा क्रियाशील रहेकी छन् । समाज सुधार सेवा मञ्च (सिसेफ) नेपालको उपाध्यक्ष, देखि लिएर रोट्रयाक्ट क्लव अफ पर्वत, सपोर्ट नेटवर्क फाउण्डेशन नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगायतका थुप्रै संघसंस्थामा आबद्ध छन् ।
बेश्यावृतिका लागि ६० हजार नेपाली युवतीहरु भारत पु-याईने गरेको खुलासा !
भारत, २०७३ भदौ १४ । भारतको राजधानी दिल्लीको जीबी रोडबाट मानव तस्करीको आरोपमा सोमवार यौन धन्धा (सेक्स रकेट) सन्चालिका सारिया बेगम र उनका पति अफाक हुसैन समेत ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनिहरु करीब ५ हजार युवतीहरु तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । उनिहरुलाई पक्राउ गरिए सँगै नेपालबाट प्रत्यक वर्ष ६० हजार भन्दा बढी नेपाली युवतीहरु वेश्यावृत्तिका लागि भारत ल्याईने गरेको रहस्य खुलेको हो ।
टाइम्स ऑफ इंडियमा प्रकाशित समाचार अनुसार दुबै पति-पत्नी सन १९९९ बाट यस यौन धंधामा थिए भने उहिहरुलाई महाराष्ट्र संगठित क्राइम नियंत्रण कानून अन्तरगतत पक्राउ गरिएको हो । समाचार अनुसार उनिहरुले यस धन्धाबाट एक सय करोड भारतीय रुपयाँ कमाई गरि सकेका छन् ।
उनिहरुले बेश्याबृत्तिका निम्ति नेपाल लगायत भारत कै पश्चिम बंगाल, ओ़डिशा, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेशबाट ५० हजार भारतीय रुपयाँमा युवतीहरु ल्याएर २ लाख भारतीय रुपयाँमा विक्री गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा नेपाल मात्र सक्षम – अध्यक्ष थापा
धरान, २०७३ भदौ १४ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २०६२÷०६३ पछि संकटपूर्ण अवस्थामा पार्टीले बोकेको विचार र सिद्धान्त अहिलेको अवस्थामा अझ सान्दर्भिक हुँदै गएकोले लक्ष प्राप्तिका लागि राप्रपा नेपाल डटिरहेको बताएका छन् । राप्रपा नेपालको चुलिदै गएको लोकप्रियता देखेर केहीले पार्टीले एजेण्डा छाडेको भनेर भ्रम छर्न कोशिस गरेपनि उनीहरु असफल हुने उनको दावी थियो ।
राप्रपा नेपाल प्रशिक्षण विभागद्वारा धरानमा आयोजित ३ दिने आवासिय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाल सरकारमा, सदनमा या सडकमा जहाँ रहे पनि आफ्नो सिद्धान्तमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
राप्रपा नेपाल प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएकोले संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नै आप्mना एजेन्डा स्थापित गरी छाड्ने अध्यक्ष थापाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मुलुकको सार्वभौमिकता र निर्णायकत्व कमजोर हुँदै जानु तथा बाह्य प्रभाव र चलखेल बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएकोले राष्ट्रवादी नेपालीहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको औल्याउदै मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा नेपाल मात्र सक्षम रहेको ठोकुवा समेत गरे । संविधानको कार्यान्वयनसम्बन्धि प्रमुख विषय नै निर्वाचन भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हुने बताउँदै अध्यक्ष थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यापक तयारीमा जुट्न सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री रामकुमार सुब्बा, महामन्त्री डा. धवलसम्शेर राणा, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख मा. शुशिलकुमार श्रेष्ठ सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष प्रेम भट्टराईलगायतले मन्तव्य राखेका थिए । सो कार्यक्रम पार्टीका धरान नगर अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने एक नम्बर प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धि अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षीत गराइने पार्टीको प्रशिक्षण विभागले जनाएको छ ।